Levitika 20 - Ny Baiboly
Levitika toko 20
Sazin'ny heloka samihafa.
1Ary niteny tamin'i Moizy Iaveh nanao hoe: 2Izao no lazao amin'ny zanak'Israely: Na zovy na zovy amin'ny zanak'Israely, na amin'ny vahiny mitoetra eo amin'Israely, manolotra ny iray amin'ny zanany ho an'i Moloka, dia hohelohin-ko faty, ka hotorahan'ny vahoaka tompon-tany vato. 3Ary hanandrina izany olona izany ny tavako, ka hofongorako amin'ny fireneny izy, fa nanolotra ny iray amin'ny zanany ho an'i Moloka, handoto ny fitoerako masina, sy hanevateva ny anarako. 4Na mody tsy mahita izany olona izany aza ny vahoaka, amin'ny anolorany ny zanany ho an'i Moloka, ka tsy mamono azy, 5dia hanandrina izany olona izany mbamin'ny fianakaviany ny tavako, ka hofongorako amin'ny fireneny izy mbamin'izay rehetra mivadika amiko toa azy ka mitolo-tena hanompo an'i Moloka.
6Raha misy olona manatona izay mpamoha angatra na mpisikidy, ka mivadika amiko hanaraka ireny, dia hanandrina izany olona izany ny tavako, ka hofongorako amin'ny fireneny izy. 7Hamasino ny tenanareo, ary aoka ho masina hianareo, fa izaho no Iaveh Andriamanitrareo. 8Tandremo ny didiko ka araho izany. Izaho no Iaveh ilay manamasina anareo.
9Na zovy nba zovy manozona ny rainy na reniny, dia hohelohin-ko faty; fa efa nanozona an-drainy na an-dreniny izy, ka dia aminy ny rany. 10Raha misy lehilahy maka vadin'olona, ka mandry amin'ny vadin'ny namany, dia hatao maty izy ireo ho valin'izany, na ralehilahy naka vadin'olona na ravehivavy nalainy. 11Raha misy lehilahy mandry amin'ny vadin-drainy, ka manokatra fitanjahan-drainy dia hohelohin-ko faty izy roroa, ka dia amin'izy ireo ny rany. 12Raha misy lehilahy mandry amin'ny vinantovaviny, dia hohelohin-ko faty izy roroa, fa nanao zava-mahamenatra; ka dia amin'izy ireo ny rany. 13Raha misy lehilahy mandry amin-dehilahy toy ny fandry amim-behivavy, dia nanao zava-betaveta izy roroa, ka dia hohelohin-ko faty; ka dia amin'izy ireo ny rany. 14Raha misy lehilahy mampirafy vehivavy mianaka, dia heloka bevava izany, ka samy hodorana amin'ny afo izy sy iretsy vehivavy, mba tsy hisian'izany heloka izany eo aminareo. 15Raha misy lehilahy miray amin'ny biby, izy hohelohin-ko faty ary ilay biby koa hovonoinareo. 16Raha misy vehivavy manatona hijangajanga amin'ny biby, dia hovonoina na ravehivavy na ilay biby, dia atao maty izy ireo, ka dia amin'izy ireo ny rany. 17Raha misy lehilahy maka ny anabaviny zanakavavin-drainy, na zanakavavin-dreniny ka izy nahita ny fitanjahany, dia haratsiana lozan-tany izany, ka hofongorana eo imason'ny taranaky ny fireneny izy, fa nanokatra ny fitanjahan'ny anabaviny, ka hilonjy ny helony. 18Raha misy lehilahy mandry amim-behivavy mararin'ny fadim-bolany ka manokatra ny fitanjahany, dia nanokatra ny fandehanan'ny rany izy, ary hofongorana amin'ny fireneny izy roroa.
19Aza manokatra ny fitanjahan'ny rahavavin-dreninao, na ny anabavin-drainao, fa manokatra ny fitanjahan'ny tenany izay manao izany, ka hilonjy ny helony izy ireo. 20Raha misy lehilahy mandry amin'ny vadin-drahalahin-drainy, dia nanokatra ny fitanjahan-drahalahin-drainy izy, ka hilonjy ny helony izy roroa. 21Raha misy lehilahy maka ny vadin-drahalahiny, dia fahalotoana izany, fa manokatra ny fitanjahan-drahalahiny izy, ka ho momba izy roroa.
22Tandremo avokoa ny lalàna, amam-pitsipiko, ka araho izany, mba tsy haloan'ny tany hitondrako anareo honenanareo hianareo.
23Aza manaraka ny fanaon'ny firenena izay horoahiko eo anoloanareo, fa nanao izany rehetra izany izy, ka maharikoriko ahy izy. 24Efa voalazako taminareo fa hianareo no handova ny tanin'ireny; homeko anareo hanananareo azy, ary tany tondra-dronono aman-tantely izany. Izaho no Iaveh Andriamanitrareo izay nanavaka anareo tamin'ny firenena hafa. 25Hanavaka ny biby madio amin'izay maloto hianareo, sy ny vorona madio amin'izay maloto, ka tsy hametaveta ny tenanareo amin'izay biby, na vorona, na izay zava-mihetsiketsika rehetra ambonin'ny tany, nasaiko navahanareo ho zava-maloto. 26Ho masina ho ahy hianareo, fa izaho Iaveh dia masina sy efa nanavaka anareo tamin'ny firenen-kafa mba ho ahy. 27Hatao maty avokoa izay lehilahy na vehivavy mamoha angatra na manao hatsaràna, hotoraham-bato izy, ka dia amin'izy ireo ny rany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1380 seconds